ငါရွှေထက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွှေ Bitcoin မဝယ်သင့်သလဲ? ယခု Wall Street တွင်အပူဆုံးဆွေးနွေးမှုဖြစ်သည်!│世界の仮想通貨･暗号通貨･新国際デジタル通貨 グローバルポータルウェブサイト ｜GVMG - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါblock ကွင်းဆက်BTC(Bitcoin)စောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေSkyBridge Capital(Skybridge မြို့တော်)JPMorgan Chase & ကုမ္ပဏီ(JP Morgan Chase)BloombergBitcoin(BTC) ဇယားဒစ်ဂျစ်တယ်ရွှေETF(ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယုံကြည်မှု)Wall Street(Wall Street)ဆွစ်ဇာလန်WEF(ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်)ဒက်ဘစ်ကဒ်မိုဘိုင်း appETH(Ethereum)XLM(Stella Rumen)LTC(အလင်းရောင်အကြွေစေ့)ETC(Ethereum ဂန္ထဝင်)encryption ငွေကြေးကို | Cryptographic ပိုင်ဆိုင်မှုအမည်ဘဏ် | ဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်းကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ | နိုင်ငံ / နိုင်ငံencryption ငွေကြေးကို | Cryptographic ပိုင်ဆိုင်မှုများ | နည်းပညာ / နည်းပညာ / အိုင်တီ / ဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့် | ဖြစ်ရပ်များ / ဖိုရမ်များ / အစီအစဉ်ဘဏ္economyာရေးစီးပွားရေး | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ အရင်းအနှီး၊ ဘဏ္Productsာရေးထုတ်ကုန်များ၊ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း | သုတေသန | သုတေသနဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း / နည်းပညာ / အခြေခံများ / ကုန်သွယ်မှုဘဏ္financialာရေး | ငွေပေးချေမှုစနစ် / လွှဲပြောင်း / သိုက် / ငွေထုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း | ကော်ပိုရေးရှင်း | ကုမ္ပဏီဇာတ်ကောင် | စီအီးအို / ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၊ အရင်းရှင်၊ ကျော်ကြားသူ၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုSEBA(SEBA ဘဏ် AG)F2f(အဆင့်အတန်းတူညီသူအချင်းအချင်းဆက်သွယ်မှု)အင်္ဂလန်ပြင်သစ်ဂျာမနီသြစတြီးယားပေါ်တူဂီနယ်သာလန်စင်္ကာပူဟောင်ကောင်အီတလီencryption ငွေကြေးကို | Cryptocurrency ချိန်း / အရောင်းရုံး / ချိန်း / ပလက်ဖောင်းDeFi(ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး)လျှပ်စီးကွန်ယက် node ကိုBlack ကမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု LLC(Black မြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု)မBlဲဘလိတ်(Matthew Break)Guy Schwarzenbach(Geishwarzenbach)Guido Buehler(Guido Buehler)မှ Ian Simpson(မှ Ian Simpson)အာဂျင်တီးနားအီဂျစ်ဂျင်းမာ့ခ် Bonnefoux(Jean-Marc Bonuf)အစုစုမတည်ငြိမ်မှုလေ့လာသုံးသပ်သူအရှိန်အဟုန်ကုန်သည်ကုန်သည်မီးခိုးရောင်စကေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ(မီးခိုးရောင်)RSINikolaos Panigirtzoglou(Nikolaos Panigilt Zoguru)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဘဏ္Economicာရေးစီးပွားရေးသတင်း | ကော်လံ / ခေါင်းစဉ်အန်သိုနီ Scaramucci(အန်သိုနီ Scaramouch)လက်ကျန်ငွေမက်ဆာချူးဆက်အပြန်အလှန်ဘဝအာမခံကုမ္ပဏီ(အစုလိုက်အပြုံလိုက်အပြန်အလှန်ဘဝအာမခံ)Ruffer ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ(Raffer ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု)ရှင်ပေါလု Tudor ဂျုံးစ်(ရှင်ပေါလု Tudor ဂျုံးစ်)Stanley Printmiller(Stanley Dracken ကြေးမုံ)ဂျော့ချ်ဆိုးရော့စ်(ဂျော့ချ်ဆိုးရော့စ်)ကွမ်တမ်ရန်ပုံငွေ(ဆိုးရော့စ်ရန်ပုံငွေ)Jim Cramer(Jim Kramer)ရင်ပြင်MicroStrategy ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း(Micro မဟာဗျူဟာ)Cypherpunk Holdings Inc.(cipher ပန့်ခ် Holdings က)သတ္တုတွင်းသတ္တုတွင်းရေကန်နေ့(လေလံဇယားကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်)PayPalနယူး Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု(COVID-19)ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများMasterCardဗီဇာဒံယလေက H Schulman(ဒံယလေက Schulman)အဲဖရက် F ကိုကယ်လီ(အဲဖရက်ကယ်လီ)BCH(Bitcoin ငွေသား)S&P 500(စံ & ညံ့ဖျင်းသည် 500 စတော့အိတ်ညွှန်းကိန်း)NasduckCashAppCME(ချီကာဂိုကုန်သွယ် Exchange)XRP(တိတ်ဆိတ်)Binance(Binance)Cross Tower(လက်ဝါးကပ်တိုင်မျှော်စင်)တိုကင်CryptocurrencyOSL(OSL)Beaxy ချိန်း(Beak Sea Exchange)Anderson က P.C. သတ်(ဥပဒေရုံး Anderson ကသတ်)Hailey Lennon(Haley Lennon)SEC(အမေရိကန် Securities Trading ကော်မရှင်)ပလက်ဖောင်းBrad Garlinghouse(သွေး Garling အိမ်)ခရစ် Larsen(ခရစ် Larsen)လုံခြုံရေးစျေးနှုန်းကျဆင်းမှု / ကျဆင်းခြင်း / ကျဆုံးခြင်းသတိပေးချက်စျေးနှုန်းများမြင့်တက် / မြင့်တက် / မြင့်တက်၏သတိပြုပါOTC(ဆရာဝန်လက်မှတ်မပါပဲဝယ်ယူနိုင်သော)ကြီးစိုးမှု
BTC(Bitcoin), ETF(ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယုံကြည်မှု), ဂျင်းမာ့ခ် Bonnefoux(Jean-Marc Bonuf), JPMorgan Chase & ကုမ္ပဏီ(JP Morgan Chase), Wall Street(Wall Street), ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွှေ, စောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေ, အစုစု, မတည်ငြိမ်မှု, ဇာတ်ကောင် | စီအီးအို / ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၊ အရင်းရှင်၊ ကျော်ကြားသူ၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း | ကော်ပိုရေးရှင်း | ကုမ္ပဏီ, encryption ငွေကြေးကို | Cryptographic ပိုင်ဆိုင်မှုအမည်, ဘဏ္economyာရေးစီးပွားရေး | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ အရင်းအနှီး၊ ဘဏ္Productsာရေးထုတ်ကုန်များ၊
encryption ငွေကြေးကို | Cryptographic ပိုင်ဆိုင်မှုအမည်
1 ငါရွှေထက် Bitcoin ဝယ်သင့်သလဲ? ယခု Wall Street တွင်အပူဆုံးဆွေးနွေးမှုဖြစ်သည်!
1.1 Virtual ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ Jean-Marc Bonufu "ရွှေသည်တစ်ချိန်ကကမ္ဘာနှင့်ကလေးသူငယ်များအတွက်လုံခြုံသောနေရာဖြစ်ခဲ့သည်、အခုတော့ Bitcoin လိုမျိုးပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အစားထိုးနေပြီ။ "
1.2 bitcoin ကိုဝယ်ခြင်းငှါရွှေနှင့်ဆက်စပ်သောစာရင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယုံကြည်မှု (ETF) ၏ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုရောင်းချခြင်း
Posted Articles Title : ငါရွှေထက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွှေ Bitcoin မဝယ်သင့်သလဲ? ယခု Wall Street တွင်အပူဆုံးဆွေးနွေးမှုဖြစ်သည်!
Posted by : ကမ္ဘာ့ Virtual ငွေကြေး / Cryptographic ငွေကြေး / အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးအသစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Portal ၀ ဘ်ဆိုဒ် | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
1 virtual ငွေကြေး / cryptocurrency စျေးနှုန်း | အမြင့်ဆုံး / မြင့်တက် / စျေးနှုန်းမြင့်တက်မှု Real-time rank-TOP10
2 virtual ငွေကြေး / cryptocurrency စျေးနှုန်း | အောက်ခြေမြင့်တက် / မြင့်တက် / စျေးနှုန်းတိုးနှုန်းကို Real-time ranking-TOP10
3 virtual ငွေကြေး / cryptocurrency စျေးနှုန်း | စျေးကွက်တန်ဖိုး / အသံအတိုးအကျယ် / ငွေပေးငွေယူအသံအတိုးအကျယ် Real-time ranking-TOP10
virtual ငွေကြေး / cryptocurrency စျေးနှုန်း | အမြင့်ဆုံး / မြင့်တက် / စျေးနှုန်းမြင့်တက်မှု Real-time rank-TOP10
virtual ငွေကြေး / cryptocurrency စျေးနှုန်း | အောက်ခြေမြင့်တက် / မြင့်တက် / စျေးနှုန်းတိုးနှုန်းကို Real-time ranking-TOP10
virtual ငွေကြေး / cryptocurrency စျေးနှုန်း | စျေးကွက်တန်ဖိုး / အသံအတိုးအကျယ် / ငွေပေးငွေယူအသံအတိုးအကျယ် Real-time ranking-TOP10
Volume ကို 24ဇ
စျေးနှုန်းဇယား (7: D)
BTC(Bitcoin)နောက်ဆုံးပေါ်ဆောင်းပါး ၈ ခု
Bitcoin ၏စျေးနှုန်းသည်、2020၂၀၁၄ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်တွင်ယန်း ၁.၂ သန်းကျော်အသုံးပြုမည်、ထိုအရပ်မှထဆက်လက်、2020年11月24日に一時19100ドルを突破しました最後に19100ドルを突破したのは2018年1月8日で、2၅ လအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း (နေ့စဉ်ပျမ်းမျှစျေးနှုန်း)、Coincheck အရ)
အမျိုးအစား အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ | နိုင်ငံ / နိုင်ငံ(4) အာဂျင်တီးနား(1) အင်္ဂလန်(1) အီတလီ(1) အီဂျစ်(1) သြစတြီးယား(1) နယ်သာလန်(1) စင်္ကာပူ(1) ဆွစ်ဇာလန်(3) ဂျာမနီ(1) ပြင်သစ်(1) ပေါ်တူဂီ(1) ဟောင်ကောင်(1)ဇာတ်ကောင် | စီအီးအို / ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၊ အရင်းရှင်၊ ကျော်ကြားသူ၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု(7) အဲဖရက် F ကိုကယ်လီ(အဲဖရက်ကယ်လီ) (1) အန်သိုနီ Scaramucci(အန်သိုနီ Scaramouch) (1) Brad Garlinghouse(သွေး Garling အိမ်) (1) ခရစ် Larsen(ခရစ် Larsen) (1) ဒံယလေက H Schulman(ဒံယလေက Schulman) (1) ဂျော့ချ်ဆိုးရော့စ်(ဂျော့ချ်ဆိုးရော့စ်) (1) Guido Buehler(Guido Buehler) (1) Guy Schwarzenbach(Geishwarzenbach) (2) Hailey Lennon(Haley Lennon) (1) မှ Ian Simpson(မှ Ian Simpson) (1) ဂျင်းမာ့ခ် Bonnefoux(Jean-Marc Bonuf) (1) Jim Cramer(Jim Kramer) (1) မBlဲဘလိတ်(Matthew Break) (1) Nikolaos Panigirtzoglou(Nikolaos Panigilt Zoguru) (1) ရှင်ပေါလု Tudor ဂျုံးစ်(ရှင်ပေါလု Tudor ဂျုံးစ်) (1) Stanley Printmiller(Stanley Dracken ကြေးမုံ) (1)စီးပွားရေးလုပ်ငန်း | ကော်ပိုရေးရှင်း | ကုမ္ပဏီ(6) Anderson က P.C. သတ်(ဥပဒေရုံး Anderson ကသတ်) (1) Black ကမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု LLC(Black မြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု) (2) Cypherpunk Holdings Inc.(cipher ပန့်ခ် Holdings က) (1) မီးခိုးရောင်စကေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ(မီးခိုးရောင်) (1) JPMorgan Chase & ကုမ္ပဏီ(JP Morgan Chase) (2) မက်ဆာချူးဆက်အပြန်အလှန်ဘဝအာမခံကုမ္ပဏီ(အစုလိုက်အပြုံလိုက်အပြန်အလှန်ဘဝအာမခံ) (1) MicroStrategy ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း(Micro မဟာဗျူဟာ) (1) Ruffer ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ(Raffer ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု) (1) SkyBridge Capital(Skybridge မြို့တော်) (1)ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း | သုတေသန | သုတေသနဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း / နည်းပညာ / အခြေခံများ / ကုန်သွယ်မှု(3) RSI (1) လေ့လာသုံးသပ်သူ(2) Bitcoin(BTC) ဇယား(2)အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့် | ဖြစ်ရပ်များ / ဖိုရမ်များ / အစီအစဉ်(1) WEF(ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်) (1)encryption ငွေကြေးကို | Cryptographic ပိုင်ဆိုင်မှုများ | နည်းပညာ / နည်းပညာ / အိုင်တီ / ဝက်ဘ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု(5) CashApp (1) နေ့(လေလံဇယားကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်) (1) F2f(အဆင့်အတန်းတူညီသူအချင်းအချင်းဆက်သွယ်မှု) (1) ပလက်ဖောင်း(1) block ကွင်းဆက်(2) သတ္တုတွင်း(1) သတ္တုတွင်းရေကန်(1) မိုဘိုင်း app(1) လျှပ်စီးကွန်ယက် node ကို(1)encryption ငွေကြေးကို | Cryptocurrency ချိန်း / အရောင်းရုံး / ချိန်း / ပလက်ဖောင်း(3) Beaxy ချိန်း(Beak Sea Exchange) (1) Binance(Binance) (1) CME(ချီကာဂိုကုန်သွယ် Exchange) (1) Cross Tower(လက်ဝါးကပ်တိုင်မျှော်စင်) (1) DeFi(ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးဘဏ္financeာရေး) (1) OSL(OSL) (1) OTC(ဆရာဝန်လက်မှတ်မပါပဲဝယ်ယူနိုင်သော) (1)encryption ငွေကြေးကို | Cryptographic ပိုင်ဆိုင်မှုအမည်(11) BCH(Bitcoin ငွေသား) (1) BTC(Bitcoin) (10) ETC(Ethereum ဂန္ထဝင်) (1) ETH(Ethereum) (3) LTC(အလင်းရောင်အကြွေစေ့) (2) XLM(Stella Rumen) (2) XRP(တိတ်ဆိတ်) (1)ဘဏ္financialာရေး | ငွေပေးချေမှုစနစ် / လွှဲပြောင်း / သိုက် / ငွေထုတ်(3) MasterCard (1) PayPal (1) ဗီဇာ(1) ရင်ပြင်(2) ဒက်ဘစ်ကဒ်(1)ဘဏ္economyာရေးစီးပွားရေး | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ အရင်းအနှီး၊ ဘဏ္Productsာရေးထုတ်ကုန်များ၊(6) ETF(ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုယုံကြည်မှု) (1) S&P 500(စံ & ညံ့ဖျင်းသည် 500 စတော့အိတ်ညွှန်းကိန်း) (1) SEC(အမေရိကန် Securities Trading ကော်မရှင်) (1) Wall Street(Wall Street) (2) ကွမ်တမ်ရန်ပုံငွေ(ဆိုးရော့စ်ရန်ပုံငွေ) (1) Cryptocurrency(1) ဒစ်ဂျစ်တယ်ရွှေ(2) ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ(2) တိုကင်(1) ကြီးစိုးမှု(1) ကုန်သည်(2) Nasduck(1) လက်ကျန်ငွေ(1) စောင်ရန်းကိုရန်ပုံငွေ(3) အစုစု(1) မတည်ငြိမ်မှု(1) အရှိန်အဟုန်ကုန်သည်(1) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ(1) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ(2) လုံခြုံရေး(1)ဘဏ္Economicာရေးစီးပွားရေးသတင်း | ကော်လံ / ခေါင်းစဉ်(3) စျေးနှုန်းကျဆင်းမှု / ကျဆင်းခြင်း / ကျဆုံးခြင်းသတိပေးချက်(1) စျေးနှုန်းများမြင့်တက် / မြင့်တက် / မြင့်တက်၏သတိပြုပါ(2) နယူး Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု(COVID-19) (1)ဘဏ္economicာရေးစီးပွားရေးမီဒီယာ | သတင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ / အသံလွှင့်လုပ်ငန်း / ဖြန့်ဖြူးရေး / မီဒီယာ / မီဒီယာ(1) Bloomberg(1)ဘဏ် | ဘဏ္institutionာရေးအဖွဲ့အစည်း(3) SEBA(SEBA ဘဏ် AG) (3)